Akụkọ - broshuọ vidio na-eduga ụwa dị ka ọgbọ mgbasa ozi kachasị ọhụrụ
Dị ka ọgbọ ọhụụ nke ngwaahịa nkwalite vidiyo vidiyo, broshuọ vidiyo ebutela mgbanwe mgbasa ozi ọhụụ n'ọtụtụ akụkụ ụwa ozugbo ọ batara n'ahịa. Site n'echiche ndị ahịa pụrụ iche, ọmarịcha mbipụta na ike dị n'ime kọmputa vidiyo vidiyo, ngwaahịa a gosipụtara echiche nkwalite pụrụ iche nke ụlọ ọrụ ahụ ma bulie ogo ụlọ ọrụ na ịdị elu pụrụ iche.
Na-ewetara gị ebipụta na ndụ na ụda na ọhụụ! Ọrụ Bespoke maka ndị okike, ndị na-ere ahịa, na ndị na-ebi akwụkwọ.
Broshuọ vidio anyị dị nha, yana obere ihuenyo dị ka iPhone ma ọ bụ smartphone na nke kachasị na ngwaọrụ mbadamba ma ọ bụ IPad.
• Nchikota akwukwo akwukwo na ihe ngosi LCD na eme ka ahia gi ma obu ihe kachasi nma.
• Na mfe ahaziri usoro, anyị na-aghọta bụla akwụkwọ echiche maka gị.
• Ihe ndọta magnet dị mfe iji. Emeghe ya na-egwu video na-emechi ya mechie.
• Ọrụ bọtịnụ na nha ihu bụ nhọrọ. Ntinye USB 5V na batrị na-agbanyeghachi.
Video broshuọ agbanweela monotonous akwụkwọ broshuọ na omenala nkwalite ụzọ; ọ na-ewetara ndị ọrụ ọmarịcha vidiyo n'oge ọ bụla na ebe ọ bụla site n'ụdị mgbasa ozi ọdịyo-visual pere mpe. Nke ka mkpa bụ na ọ matala ihe mgbochi mgbochi dị n'etiti ngwaahịa na ndị ọrụ ụlọ ọrụ ahụ.
Akwụkwọ broshuọ na-etu ọnụ maka nkwalite ngwaahịa pụrụ iche, nke na-ewetara ndị ọrụ mmetụta dị omimi, nke na-enweghị nghọta na nke atọ. Promotionkpụrụ nkwalite ahapụrụ iche pụrụ iche na-akpali ndị ọrụ nwere mmasị pụrụ iche na ika ma mepụta ụlọ ọrụ na-agaghị echefu echefu. N'otu oge ahụ, ọ na-eme ka ndị ọrụ chee na ọ bụ naanị gị.
Broshuọ vidio na-egosi echiche nke ụlọ ọrụ ahụ nke ọma na nke ziri ezi, nke na-enye anyị ume ọhụrụ. Ọ na-eme ka ọdịbendị ụlọ ọrụ, ngwaahịa ụlọ ọrụ, wdg bụrụ ihe pụrụ iche ma gosipụta ha n'ọkwa dị elu n'ụzọ zuru oke, na-eweta mmetụta mgbasa ozi ka mma.